Tag: olu nke onye ahịa | Martech Zone
Tag: olu nke onye ahịa
Wenezdee, Machị 31, 2010 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
OpinionLab bụ ikpo okwu maka inweta ozi ndị ahịa site na nyocha na nzaghachi nke weebụsaịtị gị. OpinionLab na - akpọ ya Voice-Of-Customer (VOC) Data. OpinionLab na-agbasa atụmatụ ya ugbu a iji tinye ma nyocha na nyocha. Nke a na-enye aka inye aka dozie nzaghachi nke ndị ọbịa gị na mmemme saịtị ha. Na ọnụ ahịa nke inweta onye ahịa ọhụụ ugboro isii ruo ugboro asaa nke ijigide otu dị, ihe dị mkpa maka ụdị iji gbanye ntinye